लकडाउन साउन ७ सम्म, काठमाण्डाै पनि लागु हुने भयो यस्तो नियम! – PathivaraOnline
Home > समाचार > लकडाउन साउन ७ सम्म, काठमाण्डाै पनि लागु हुने भयो यस्तो नियम!
admin June 30, 2020 June 30, 2020 समाचार	0
सरकारले हालकै अवस्थालाई आगामी ७ साउनसम्मलाई लम्ब्याउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले हाल जारी खुकुलो लकडाउनलाई आगामी ७ साउनसम्म लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो ।
यो भाईरल कमेडी टिकटक भिडियो हेरेपछी तपाइले हासो रोक्न सक्नुहुन्न – भिडियो